Vaovao - Fahaiza-mifidy amin'ny efijery mihetsiketsika tsipika
1. araka ny fisafidianana ny tranonkala
Ny halavany sy ny sakan'ny tranokala dia tokony hojerena amin'ny karazan-tsivana amin'ny vibration linear; indraindray ny sakan'ny fivoahan'ny efijery mihetsiketsika mivantana dia voafetra, ary ny haavon'ny tranokala koa voafetra. Amin'izao fotoana izao, motera mihetsiketsika roa dia azo apetraka eo an-tampony na amin'ny andaniny roa amin'ny efijery mihetsiketsika arakaraka ny toetran'ny tranonkala.
2. Ny fijerena ny marina sy ny vokatra azo avy amin'ny fizahana dia tokony hojerena
1) Arakaraka ny haben'ny halavan'ny efijery misy ny efijery mihetsiketsika, ny avo kokoa ny mari-pahaizana fitiliana, ny lehibe kokoa ny sakany, ny haavon'ny vokatra fitiliana. Noho izany, ny sakany sy ny lavany mety dia tokony hofidina mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana.
2) Rehefa ambany ny fahaizan'ny famokarana dia afaka misafidy ny karazana efijery mihetsiketsika kely kokoa isika ary rehefa avo ny fahaizan'ny famokarana dia tokony hisafidy ny efijery mihetsiketsika mivantana isika.
3. Ny zoro fitongilanana eo amin'ny efijery misy ny efijery mihetsiketsika tsipika,
Raha kely loatra ny zoro firongan'ny tontolon'ny efijery dia ho voasakana ny fitaovana. Raha lehibe loatra ny zoro fironana, dia hihena ny mari-pahaizana fitiliana. Noho izany, ny zoro firongan'ny tontolon'ny efijery dia tokony ho antonony.
4. toetoetran'ny fitaovana
1) Rehefa misafidy efijery mihetsiketsika isika dia tokony misafidy fitaovana samihafa arakaraka ny toetra ara-nofo samihafa. Ohatra, manimba ny fisafidianana efijery mihetsiketsika tsy misy vy.
2) Ny haben'ny harato dia voafantina arakaraka ny haben'ny poti-javatra.